Skins Editor for Minecraft PE (3D) 3.9.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.9.7 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Skins Editor for Minecraft PE (3D)
Skins Editor for Minecraft PE (3D) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အလှဆုံးအရေခွံ ဖန်တီး. Minecraft အတွက်သူတို့နှင့်အတူဆော့ကစား!
အရေပြားကိုဖန်တီးဒီအခမဲ့လျှောက်လွှာနှင့်အတူအများကြီးပိုလွယ်သည်။ လွယ်ကူသောတည်းဖြတ်ရေးအတွက်အဆုံးစွန်အဘို့, သင်ချင်တယ်အဖြစ်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းစကေးနှင့်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
သင်တည်းဖြတ်ချင်သောအသားအရေ၏အစိတ်အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့အပြင်အယ်ဒီတာသင်သည်သင်၏အရေပြား၏ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုတော်မူသော Minecraft ၏အရေခွံဗားရှင်း 1.8, နှစ်ယောက်အလွှာထောက်ခံပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့်ပြခန်းနှင့်ပြင်ဆင်ရန်ကနေမဆိုအရေပြားကို select လုပ်ပါသို့မဟုတ်ရိုးရိုးမကျြစိကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် :)
- 3D Editor ကို
- အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီ edited နိုင်ပါတယ်
- Tool ကို "Cancel"
- အရေခွံ၏ပုဂ္ဂလိကအစုအဝေး (အရေခွံရိုးရှင်းစွာသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတည်းဖြတ်ရန်ပလီကေးရှင်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ)
- 3D အမြင်တည်းဖြတ်သည့်အခါ
ဒီ Minecraft Pocket Edition ကိုများအတွက်တရားဝင်မဟုတ်သော application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ application ကို Mojang AB နှင့်အတူမည်သည့်လမ်းအတွက်ချိတ်ဆက်မထားပါ။ အဆိုပါ Minecraft အမည်, အ Minecraft အမှတ်တံဆိပ်နှင့် Minecraft ပိုင်ဆိုင်မှုများ Mojang AB သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လေးစားမှုပိုင်ရှင်၏အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ http://account.mojang.com/documents/brand_guidelines နှင့်အညီ
Skins Editor for Minecraft PE (3D) အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Skins Editor for Minecraft PE (3D) အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Skins Editor for Minecraft PE (3D) အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
dwiko-lukito စတိုး 158.68k 64.98M
Skins Editor for Minecraft PE (3D) ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Skins Editor for Minecraft PE (3D) အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.9.7
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.worldofskins.org/pp/index.html
လက်မှတ် SHA1: 8E:22:36:0F:F9:6C:48:2A:2A:6C:81:E3:4F:86:23:E2:90:A8:64:AE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Evgeniy Osipov
အဖွဲ့အစည်း (O): Crone Games
နယ်မြေ (L): Togliatti
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Samara
Skins Editor for Minecraft PE (3D) APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ